प्रिया सेन्चुरी सांगीतिक अकासकी उदयमान गायिका हेरौ उहाँलाई कस्तो जीवन साथी मन पर्छ | onlineharpal.com
प्रिया सेन्चुरी सांगीतिक अकासकी उदयमान गायिका हेरौ उहाँलाई कस्तो जीवन साथी मन पर्छ
on: ७ बैशाख २०७४, बिहीबार १७:२८ In: bignews1, अन्तर्वाता
आदरणीय दर्शक स्रोता आज हामी यहाँहरुको समक्षमा नेपाली सांगीतिक अकासकी उदयमान तारा कर्णप्रिय स्वरकी धनिलाइ प्रस्तुत गर्न गाइ रहेका छौ। साचिकै कोइलीको जस्तै आवाज छ उहाँको जसको नाम हो गायिका प्रिया सेन्चुरी उहाँको राम्रो बिशेषता भनेको उहाँ पुर्बेली चेली हुनुहुन्छ तर उहाँले देशै भारको गीत गाउनु हुन्छ अलि बढी पश्चिमकै गाउनु भाको छ। उहाँलाई समयमा बिहानको मिर्मिरेउषा मन पर्छ फूलहरुमा लाली गुराँस मन पर्छ र फलफुलहरु मध्ये उहाँलाई अनार मन पर्छ। आउनुहोस हाम्रो खबर कोसेली डटकमको सम्बादाताले लिएको यो रमाइलो कुराकानी हेरौ।
यहाँलाई खबर कोसेली डटकममा हार्दिक स्वागत छ।
– धन्यवाद, नमस्कार सर्ब प्रथमत खबर कोसेली हेरेर बस्नु भएका सम्पूर्ण मेरो आदरणीय दर्शक महानुभावहरुमा म लोकदोहोरी गायिका प्रिय सेन्चुरीको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार साथमा सांगीतिक अबिबदन पनि टक्र्याउन चाहन्न्छु।
तपाई निकै चर्चित हुनुहुन्छ यतिखेर छोटो समयमा नै धेरै गीतहरु गाइ सक्नु भएको छ बिशेस त तपाइको स्वर एकदमै कोइलीको जसतै कर्णप्रिय छ। धेरै दर्शकहरुले एकदमै मन पराई रहनु भाछ यसमा के भन्न चाहनु हुन्छ ?
– यसमा सर्ब प्रथम दर्शक महानुभावहरुलाई धेरै धन्यबद दिन चाहन्छु जसको कारणले म यहाँसम्म आउन सफल भएको छु। छोटो समयमै मेरो गीतहरु सुनिदिनु भयो, मनपराइ दिनु भयो त्यस्को लागि फेरि पनि दर्शक स्रोताहरुलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।
अहिले निकै व्यस्त हुनुहुन्छ होला है ?
– अहिले व्यस्त व्यस्तै नै छु भन्नु पर्छ गीतहरु रेकडिङको क्रम जारि छ। अनि प्रोग्रामहरुमा पनि जानै पर्यो जेहोस व्यस्तै छु।
स्टेज प्रोग्रामहरु पनि गर्नु हुन्छ होला है ?
– नयाँ नयाँ हो गरिन्छ अहिले सम्म चार पाँच वटामा गरिसकेको छु धेरै त भाछैन जेहोस गरिदै छ।
अहिले तत्काल चै कुन गीत बजारमा ल्याउदै हुनुहुन्छ ?
– अहिले भर्खर नयाँ गीत सम्थिङ दुइ हप्ता मात्र भाछ मिठो मुस्कान छकि छैन तिम्रो ओठमा भन्ने गीत बजारमा ल्याई सकेको छु केहिदिनमा भिडियो पनि ल्याउदै छु त्यहि हो।
यस्तो मिठो गीत गाउनु हुन्छ यो कलाचाई कताबाट सिक्नु भयो नि ?
– यो कला भन्नु नै पर्दा चै मैले सिकेको छैन काठमाडौँमा पढाइको सिलसिलामा आउदा यो क्षेत्रमा पहिला देखि लाग्ने सोच थियो त्यो हुदाखेरी म यहाँ आएर सिक्ने अवसर पाको छैन मुख्यत समय नै छैन यो महिनाको अन्त्य तिर चै समय निकालेर अबस्य सिक्छु।
तपाइँ त खासमा पुर्बेली चेली हुनुहुन्छ पूर्वको गीतहरु मिठोसंग गुनगुनाउनु हुन्छ तर पश्चिमको गीतहरुनी गाउनु भाछ। तपाइले पूर्वको गीतहरु भन्दानी पश्चिमको गीतहरु अलि बढी गाउनु भाछ यस्तो संगम कसरी हुन पुग्यो ?
-यो कसरी यस्तो भयो भन्दा खेरि सर्बप्रथम गीत गाउने अबसरै त्यो आयो तेसैले पश्चिमेली गीत धेरै गाइयो। पुर्बेली गीतहरु पनि गाइदैछ त्यै हो पश्चिमेली गीतमा अबसर धेरै आएरै हो।
अब प्रसंग अलिकति बदलौ रमाइलो कुरा कानी गरौ बस्ताबमा तपाइलाई समय हुन्छ्नी बिहानको मिर्मिरे उषा अनि बेलुकीको गोधुली सांझा कुन मन पर्छ ?
– मलाई बिहानिनै मन पर्छ किनकि रियाज गर्दा पनि बाहिर तिर घुम फिर गर्दा पनि बिहनिकै मिर्मिरे उषा धेरै मन पर्छ।
तपाइलाई खाने कुराहरुमा सबै भन्दा मिठो लाग्ने के हो ?
-खानेकुरामा मललाई भात अनि सब्जिमा चै निग्रो सबभन्दा मन पर्छ निग्रो तरकारीहरुमा बेस्ट नै हो अनि करेला त्यस्ता त्यस्तै हो।
फलफुलहरुमा तपाइलाई सबभन्दा मनपर्ने ?
– फलफुलहरुमा भन्नु पर्दा अनार हो त्यस पछि स्वाउ, केरा, सुन्तला।
सबै भन्दा मन पर्ने फुलहरु मध्ये ?
सांगीतिक क्षेत्रमा नै जमेर जीवन गुजार्नु सकिन्छ कि सकिदैन कस्तो लाग्छ ?
-यो सांगीतिक क्षेत्र मै लागेर जीवन गुजार्नु त एकदमै गारो छ यो समयमा तर पनि गर्दै जाउँ भयो भने यसमै रमाउछु भएन भने पनि नि ठिकै छ। एउटा आफ्नो सोक पनि हो जिन्दगी नै चलाउनको लागि यहि फिल्डमा नै लागि रहन्छु तर यहि फिल्डबाट जीवन चलाउछु यता त्यता त्यो चै छैन।
अब रमाइलो बिषय तिर नै प्रबेस गरौ तपाइलाइ प्रेम प्रस्ताब आउँछ ?
– प्रेम प्रस्ताव आउँछ नै भन्नु पर्यो।
कति आउँछ ?
– जेहोस ठिक ठिकै आउँछ धेरै पनि नभनौ थोरै पनि नभनौ ठिक ठिकै आउँछ।
अहिले कसैसंग रिलेसनसिपमा त हुनुहुन्न नि कि हुनुहुन्छ ?
– अँ छैन अहिले सर्बप्रथम लव गर्छु भनेर सोचेको छुइन जेहोस आफुलाई नि मन पर्छ कुनै व्यक्तिहरु तर लव गरिहालौ त्यो छैन, जेहोस गफ चै हुन्छ राम्रोसंग तर त्यहि हो मेरो जीवन साथि छनोटमा परेको छैन।
केहि समय पछाडी त जीवन साथीको छनौट गर्ने बिचारमा हुनुहुन्छ होलानी ?
-जीवन साथि छनौट गर्ने बिचारमा त छु तर हुनु पर्यो प्रियालाइ मन पर्ने।
यहँलाइ मनपर्ने जीवन साथीमा हुनुपर्ने गुणहरु चै के के हुनु पर्छ नि ?
-मेरो जीवन साथी यस्तो होस् जस्तो लाग्छ जसले गीत संगीतलाइ धेरै माया गरोस, प्रियाको हरेक दुख, सुख बुजोस, साथ दिओस र धुम्रपन, मद्यपानबाट चै टाढै रहोस यस्ता यस्तै तर यस्तो पाउन गारो छ।
कामना गरौ तपाइले चाहेको जस्तै आफ्नो भबिस्यको राजकुमार प्राप्त गर्न सक्नुहोस।
– म प्रतिक्षामा छु।
अन्त्यमा यहाँले हाम्रो खबर कोसेली डटकम मार्फत आफ्नो दर्शक स्रोताहरुलाइ केहि भन्नु छ कि ?
-म के भन्न चाहन्छु भने मेरो आदरणीय दर्शक स्रोताहरुलाई अहिलेको क्रममा गीतसंगीतमा धेरै बिकृति पनि आइ रहेको छ। ति हरेक बिकृति विसंगति हटाएर राम्रो गीत राम्रो स्वरहरु चै हजुरहरुले मन पराइ दिनु होला भन्न चाहन्छु अनि जुन हजुरहरुले मलाइ चिनी रहनु भएको छ प्रिया सेन्चुरी भनेर म नै हुँ। मेरो गीतहरु एक पछि अर्को गरेर धेरै बजारमा आउने क्रम जारि छ। प्रिया सेन्चुरी माया लाएसी भनेर सर्च गर्नु भए त्यसमा धेरै गीतहरु हेर्न सक्नु हुनेछ मेरो गीत चै युटुबमा गएर खोजि खोजि सुनिदिनु होला राम्रो को राम्रो भनिदिनु होला र नराम्रो को नराम्रो भनि दिनु होला यो आग्रह गर्न चाहन्छु।